I-E-Five Element Generating (Sheng) kunye noLawulo (Ke) Iimjikelezo
Unqulo & Umoya Imigaqo kunye nokuSebenza
I-Elemental Dance of Creation & Destruction
Inkqubo yesihlanu ye-Element System ye-Medicine yaseTshayina kunye ne- Taoist imisebenzi yokusebenza ngokubambisana kwezijikelezo ezine. Ezi zimbini zale mijikelezo - i-Generating (Sheng) neyokuLawula (Ke) Iimjikelezo-zimela ibhalansi kunye nokuvisisana kwenkqubo. Eminye imijikelezo emibili - i-Overnging (Cheng) kunye ne-Cycling (Wu). Ngokubambisana, le meko yenkxaso kunye nokulawula - kunye neendlela zokunika ingxelo ngokumalunga nokujikeleza kunye nokuhlambalaza - vumela izinto ezinhlanu (ukuhamba ngokuthe ngqo okanye izigaba zamandla) ukuba zisebenze ngokuvisisanayo, kwindalo yemvelo kunye nakumntu wethu umzimba.
Isizukulwana / i-Sheng Cycle (aka Creation, Ukutya okanye uMama wesiXhosa)
Umjikelezo weSheng okanye wesizukulwana, njengoko igama layo lithetha, lulwalamano lokutya kunye nenkxaso yento enye enye. Ngendlela efanayo umama anondla ngayo umntwana wakhe, ngokunjalo nganye yezinto ziyanondla into "yomntwana" wayo. Umgaqo osisigxina ovela kulo, kukuba, ukunyusa umntwana, ubuchule bokuncedisa kwakhona into eyinina yomntwana.
Ukusebenzisa izalathiso kwihlabathi lezendalo ngenye indlela yokubonisa iSikhephe seSheng:
Amanzi adala umthi - njengoko imvula inondla umthi
ukhuni luvelisa umlilo - ngendlela yokutshisa imithi kubangela umlilo
Umlilo udala umhlaba - njengomlotha (oba yinxalenye yomhlaba) uvela kwimithi etshiswayo
umhlaba uvelisa isinyithi - njenge-ore yensimbi ichithwa emhlabeni
isinyithi senza amanzi - ngendlela amanzi ayenzela ngayo isinyithi
Ukulawula / Ke Ke Cycle (aka Cycle Destruction)
Umzila wokuLawula umela ubudlelwane obathintela nayiphi na into enikeziweyo ukuba ibe nzima kakhulu - inamandla kakhulu ngokumalunga nenkqubo ngokupheleleyo.
Singazicingela oku njengento ehambelana nomthetho "wokuhlola nokulinganisela" inkqubo, okanye "uthando olunzima" lomgcini, olubeka imida ecacileyo yomntwana. Ngokwentsapho-ubudlelwane bethu bobuhlobo, ngu "ugogo" ophethe lo lawulo olusempilweni phezu kwento "yomzukulwana".
Njengoko kukhankanywe ngasentla, ukujikeleza kunye nokulawula imijikelezo kubambisana nokusebenza ngokulinganayo nokusempilweni kweNkqubo yesihlanu ye-Element.
Ukunyusa (Cheng) Isondo
Ukungalingani ngaphakathi koLawulo / Ke i-Cycle kunokudala into ebizwa ngokuba yi-Overacting (Cheng) Cycle: umzekelo apho "ugogo" inxalenye, endaweni yokufumana "ukulawula" umzukulu, ukulimaza umzuzwana ngokusebenzisa umlinganiselo ongekho mthethweni, oko kukuthi "bayaphaya" kweso sigaba.
Ukuthuka (Wu) Uhambo
I-Cycling Insuling / Wu ibonisa enye imeko yokungasebenzi ngokungafanelekanga / Ke Ke Cycle ukusebenza. Oku kwenzekayo xa "umzukulu", endaweni yokulawulwa ngokufanelekileyo ngu "ugogo," uphendulela amandla kagogo ugqithise, ngokwaloko "uhlambalaza" umzamo wokuwulawula. Omnye umzekelo ovela kwihlabathi lendalo kukuba endaweni yomhlaba ilawulwa ngamanzi ngokufanelekileyo -thi njengamabhanki omlambo ohambisa umlambo wamanzi-ngamanzi kunokuthi "ukuhlambalaza" lo mzamo wokulawula impilo, nokukhukula iibhanki, ukuhlamba emhlabeni.
Ngoko, kwakhona, ukujikeleza kunye nokuhlambalaza kubhekisa ukusebenza okungalinganiyo, okungahambisani nokuhlaselwa kweStlement Element System. Ukusetyenziswa kwe-diagnostically, iimpawu zokugqithisa okanye ukuhlaziywa kwemijikelezo kunokubonelela ngempendulo ebalulekileyo, ukuvumela ukuba ugqirha okanye umqeqeshi we-qigong, angenele ngendlela ebuyisela inkqubo kwi-Generation & Control Control Cycle.
Index of Taoism Articles
Ukucamngca Ukuphuhlisa Ubunono BamaNgqina
Amanqaku okuSebenza: Ukwazisa kunye neQumrhu
Imbali YeTaoism NgamaDynasties
Funda indlela i-Qi ihamba ngayo ngokusebenzisa i-12 iMeridians Main
I-Tao: Iindlela ezingenasiphelo
Ziqhelise Ukuhamba Ukucamngca
Umkhosi weMiddle-Autumn - iZhongqiu Jie
I-Commonwealth v. Hunt
Isingeniso kwiKholamu yaseDoric
USamuel L Jackson Uxubusha "Inyoka Yomnyama Moan"
Indima Yobomi NoThixo KwiBuddhism
I-Angle yeBuso (Iigama zeGalofu)
I-Nevada Silver Rush
I-Rainbow Fire Halloween Jack-o-Lantern
UJames Harvey uRobinson: 'Kwiintlobo ezininzi zokucinga'
Indlela yokwenza i-Aspirin esuka kwi-Willow
Indlela yokuHlanganisa iKurtosis yoLwabelo
I-Barotrauma yeNtloko: Ininzi yeScuba Diving Injury
NwabaSebenzi beeNombolo zesiFrentshi kwiNklasi
Ukufa kukaMarc-Vivien Foe
I-Count of Monte Cristo
IiKlasi zaseNtaliyane zamahhala
Yiyiphi Imizekelo Yezinto Ezingekhoyo?